ajụjụ 737 MAX
1 afọ 3 ọnwa gara aga #742 by jimidget
Boeing dị na 737-MAX nke na-eji otu engines dịka 787 nke na-echekwa ego iji na-agba ọsọ, ya mere inye ụgbọ elu ahụ dị ogologo. enwere ike ịnwe ihe ndị ọzọ na ya nke m ga-amaghị. enwere ohere ọ bụla na n'ọdịnihu anyị ga-ahụ nke a na nbudata?
1 afọ 3 ọnwa gara aga #743 by Jamesman8
Enwere ọtụtụ ihe na-ezighị ezi na nke a. Nke mbụ, 737MAX anọwo gburugburu maka ihe dịka otu afọ na ọkara, ma na-efe ahịa kemgbe May 2017 (Malindo Air). Nke abụọ, HAHAHAHAHAHAHAHAHA. 737MAX na 787 jiri otu engines ahụ? Ị bụ nwoke dị elu? ihe igwe eji eji 787 eme ihe dika udi dum nke 737 fuselage. 787 jiri GE GEnx na Rolls Royce Trent 1000, ugbu a 737 na-eji CFM LEAP-1B. Enweghị nsụgharị nsụgharị nke ụgbọelu a maka FSX / P3D ma e wezụga mpụta TDS. PMDG ekwughị okwu na nke a dị ka ihe ga-ekwe omume.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Whitten
1 afọ 3 ọnwa gara aga #744 by jimidget
Chaị. Jamesman8 nwere nsogbu àgwà. O nwere ike ọ gaghị adị m mma mgbe nile, mana, oge a ka m bịara nso. nke a bụ Boeing web tech specs na ụdị 737 nke MAX. Ma eleghị anya onye dị mkpa nwere ike ịza ajụjụ a:
1 afọ 3 ọnwa gara aga #745 by Jamesman8
Maka ịchọrọ na ị bịaghị ebe dị nso, ha na-eji engines dị iche iche, m wee zaa ajụjụ gị. TDS 737 MAX dị na weebụsaịtị a. Gaa ya ya.
Daalụ natara: 21
1 afọ 3 ọnwa gara aga #746 by Gh0stRider203
Ana m enye gị nhọrọ abụọ. 1) na-enwe mmekọrịta na ịdị mma n'ebe ibe gị nọ; ma ọ bụ 2) Ana m emechi eri a. Enweghị nhọrọ 3rd.
1 afọ 3 ọnwa gara aga #749 by Jamesman8
Ị nwere ike ịkpọchi ya, azara m ajụjụ ya. Adịghị m eme ihere na m na-ekwupụta eziokwu dị ọcha.
Daalụ natara: 45
1 afọ 3 ọnwa gara aga #751 by Dariussssss
Naanị n'ihi na isiokwu a dum mere ka m chie ọchị dịka ọ dịtụbeghị, Agaghị m ehichapụ ya ..... lol
1 afọ 3 ọnwa gara aga #764 by superskullmaster
Ma eleghị anya, ọ bụ naanị m mana ọ dị m ka ọ bụrụ na mmadụ na-ajụ ya maka ya, ị ghaghị inye ha ya. Anyị niile nwere internet na google, anaghị m ahụ ihe ọ bụla na-ezighị ezi na ụzọ e si azaghachi akwụkwọ mbụ ahụ. Ọ bụ ezigbo ihe ọchị.
1 afọ 3 ọnwa gara aga #778 by Gh0stRider203
Kwadoro ka o wee bụrụ ihe atụ nke ihe ọ BỤGHỊ ime mgbe ị na-ede post (na otu esi (~ ụkwara ~ "ọ bụghị") zaghachiri ụdị posts).
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Dariussssss
1 afọ 2 ọnwa gara aga #781 by julian1245
Gys what jimidget na-agbalị na-ekwu na ha jiri obiọma detuo engine na 787 ma tinye ha na 737 max ma james kwesịrị na ha bụ 2 dị iche iche engine ma ya na ihe jimidget na-agbalị ikwu na ha na-eme dị ka otu engine na m kwenye.
biko meekwala ndị nnu ekele maka na m maara na ha dị na weebụsaịtị a
Kweghị: ịgbakwunye attachements.
Oge ike page: 3.033 sekọnd